China Thenga i-59-46-1 kumthengisi weprocaine kumzi-mveliso waseTshayina kunye nabavelisi | Guanlang
Singomnye wababoneleli abaphambili beprocaine kunye nabavelisi eChina, ukuba ufuna ukufumana iprocaine cas 59-46-1, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngeodolo yesampulu kunye nexabiso lokhuphiswano.
Elinye Igama:Isiseko seProcaine
Ipakethe yezoThutho: 25kg ngegubhu ngalinye
IHebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. yenye yezona ziphambili abathengisi beprocaine eTshayina, sivelisa procaine ukusuka kumzi-mveliso wethu kunye neteknoloji yethu ikakhulu kubathengi abavela eYurophu naseMelika.
Iimpawu zeMichiza : ikristale emhlophe.
Ukusetyenziswa kwe-inhibitor ye-sodium channel. Ii-anesthetics zasekhaya.
Isiphumo setyhefu sokuthobeka, ngokukhawuleza kwaye sikhuselekile. Ifanelekile kwi-anesthesia yendawo, isetyenziswe kwiso, indlebe, impumlo, amazinyo, ukusebenza, isetyenziselwa i-anesthesia yokungena, i-anesthesia kunye nomphathi wonyango oluvaliweyo. Imveliso ikwasetyenziswa kwimveliso yeprocaine ipenicillin.
Ngaphambili: Iprocaine hydrochloride umthengisi e-china CAS 51-05-8
Okulandelayo: ababoneleli be-N-methylformamide e-china Methylformamide NMF kunye ne-cas 123-39-7
abathengisi beprocaine eTshayina
Iinqununu ze-Boric Acid CAS 11113-50-1 ekuthengiseni okushushu
Procaine hydrochloride umthengisi e china CAS 51...
Tetramisole hydrochloride umenzi womthengisi...